Guluubka muraayadaha indhaha ee Shiinaha ee bulukeetiiga ah, jumlada rondelle galaas garaam ah oo loogu talagalay samaynta dahabka
Guluusyada muraayadaha indhaha ah waa nooc caadi ah oo ka kooban waxyaabo la isku qurxiyo, oo si weyn loogu isticmaalo dharka, dharka fiidkii, kabaha, koofiyadaha, boorsooyinka gacanta, madax-goynta, dharka dhogorta leh, dharka xijaabka, iftiinka, farsamada, iwm Gitaarka lafaha ah, guluusyada la tuuro, guluubka gogosha, guluubka kubeega, guluusyada wareega, iwm.
Guluubyada loo yaqaan 'Crystal Bicone' - Koofiyadaha loo yaqaan 'Crystal Bicone' kubbadaha loo yaqaan 'Crystal Bicone' ayaa ah qaababka loo yaqaan 'bead style' ee ugu caansan dhammaan qaybaha. Guluusyada alaabada 'Bicone' waxay ku yimaadaan kaladuwanaanshaha balaaran ee midabada iyo saameynta sidoo kale toddobo cabbir oo isku mid ah. Qaabkayaga loo yaqaan 'Crystal Bicone' ee ku yaal 3mm ilaa 10mm cabbir ayaa hadda la heli karaa.
Kubeegayaasha wareega Wareegga-Koollada wareegyadu waxay kuu muujiyaan isku xirnaan aad u wanaagsan iyo dhalaal wanaagsan waxayna ballaarisaa iftiinka ugu weyn ee cabirkooda. Kuwani guluusyada qurxoon ayaa ka mid ah kuwa ugu caansan qaababka dhalada muraayadaha. Xulashada ballaaran ee loo yaqaan 'Wareega' Round 'waxaa ka mid ah sagaal cabbir iyo noocyo farabadan oo caan ah iyo saameyn.
Guluusyada 'Crystal Drop' - guluubka wax lagu soo tuuraa waa wax cajiib ah oo ku jira naqshadaha adag ama sida silsiladaha silsiladaha, hilqadaha dugaagga ama silsilado. Meelkasta oo aad gashid, waxaad dhaqdhaqaaq ku abuuri kartaa dahabkaaga iyadoo isha ay soo jiidaneyso dhererkooda wajiga.
Waxyaabaha Laydhka Dabacsan Crystal, Lampwork & Glass
Nooca Shahaadada Midkoodna
Goobta asal ahaan Hubei, Shiinaha
Magaca Astaanta DS Crystal
Nambarka Model G180714023
Midabka gadhka in ka badan 100 dad ah
Magaca badeecada Guluusyada koobabka buluugga ah
Cabbirka 2mm 3mm 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm iwm
Waxyaabaha Crystal, Lampwork & Glass
Nooca Beran Strands
MOQ 100 Calan
Awoodda Sahayda: 100000 Strand / Strands sitimaankiiba
Samaynta dharka garaashka DIY ee dahabka qaaliga ah Glass bicone bead
Faahfaahinta baakadaha 2mm, 3mm 6000-6500 strands / kartoon
4mm 4500 strands / kartoon
6mm 1500 strands / kartoon
8mm 1000 strands / kartoon
10mm 500 strands / kartoon
Waqtiga Gaarsiinta 3-15 maalmood
Dekadda: Ningbo / Shanghai
Qiyaasta Waqti (maalmo)
Guluubka Shiinaha ee Glass Crystal Glass Bulk ， jumlo Rondelle galaas Crystal Beads Loogu talagalay samaynta dahabka
* Ragaloofka laba jibaaran, waxaan haysanaa in kabadan 100 midabyo iyo cabir ah min 2mm ilaa 18mm
2mm 3mm 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm iwm
Fadlan tixraac kaararka midabkeena
Dahabka Garabka Dahabka ah ee Garabka Dahabka ah Dangle Jewelry Set Pendant Charm
100 xargood midkiiba cabirkiiba
Hore: Koofiyadaha muraayadaha qurxinta wanaagsan ee quruxda badan - Jumlo jumlo k9 teardrop rhinestones dhagxaan qaali ah, tayo sare leh nooc kasta oo heer dambe ah oo ah dhalada dhalada kulul ee alaabta iibka iibka 3 iibsadaha - Jingcan
Xiga: Bohemian fashion bead handmade mens dahabka jijimooyinka, jijimooyin jumladeed oo jumlaad ah
Goads Crystal Beads
Guruubka Glass Crystal